सेलिब्रेटीहरुको दसैँ योजना कस्तो छ ? « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
सेलिब्रेटीहरुको दसैँ योजना कस्तो छ ?
२५ आश्विन २०७८, सोमबार ५ : ४९ बेलुका
बडा दसैँ नेपालीको घर आँगनमा प्रवेश गरिसकेको छ । अघिल्लाका बर्ष झै यसपालि पनि कोरोना संक्रमणको त्रास कायमै रहेकाले स्थिति त्यत्ति सहज भइसकेको छैन । यद्यपि, परम्परालाई निरन्तरता दिँदै चाडपर्व भने सबैले मनाउने गरेका छन् । चाडबाड मनाउन सर्वसाधारणले झै सेलिब्रेटीले विशेष योजना बनाउँने गरेका छन् । सेलिब्रेटीहरूलाई यसवर्षको दसैँलाई कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ रु भनेर न्युज कारखानाका लक्ष्मण सुवेदीले प्रश्न गरेका छन् । हेरौं उनीहरूको जवाफ स्–
यसपालिको दसैँ मेरा लागि बिशेष छ । भर्खरै घरमा नयाँ मान्छे ९छोरी० को आगमन भएको छ । हरेक दिन दसैँ जस्तो फिल भइरहेको छ । बितेका दुई बर्षभन्दा यसपालि वातावरण अलि खुला छ । तर पनि सुरक्षित तवरले दसैँ मनाउनु पर्छ ।